mercredi, 08 août 2018 21:37
Fifidianana ho Filoham-pirenena: Efatra hatreto no nametraka ny antontan-taratasiny teny amin’ny HCC
Andry Nirina Rajoelina (Tanora MalaGasy Vonona), Ravelonarivo Jean (Antokom-BAhoaka (ABA)), Mailhol André Christian Dieu Donné (Gideona, Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara (GFFM)) ary Ernaivo Fanirisoa (ZAnak’i MAdagasikara (ZAMA) et PArti TRAvailliste Malagasy (PATRAM)) ireo hatreto no tonga nametraka ny antontan-taratasy firotsahan-kofidiana ho filoham-pirenena amin’ny 7 novambra 2018 teny anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC) nanomboka ny 1 aogositra ka hatramin’ny anio.
Hikatona amin'ny 21 aogositra amin'ny 5 ora hariva ny fandraisana ny dosie firotsahan-kofidiana eny anivon'ny HCC.
mercredi, 08 août 2018 20:18
KRAOMA: Démission du DG
La raison qui a poussé le Directeur général de la société d'État Kraomita Malagasy, Arsène Rakotoarisoa, de déposer sa démission n'est pas dévoilée, mais celle-ci trois semaines après le rapt des quatre employés de KRAOMA. 100 millions d'Ariary auraient été payés aux ravisseurs en échange de la libération de ces employés.
Côte d'Ivoire: Nahazo famotsoran-keloka i Simone Gbagbo
Nivoaka ny fonja anio alarobia 08 aogositra, notanana azy nandritra ny 7 taona tao Côte d'Ivoire, i Simone Gbagbo, vadin'i filoha teo alohan'ny Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo, nandritra ny ady nisy taorian'ny fifidianana ho filoham-pirenena nahalany an'i Alassane Ouattara.
Nizotra avy hatrany tany antranony izy, ary feno mpiara-mitolona nitsena azy.
I Laurent Gbagbo vadiny moa dia mbola voatana any La Hay, fitsarana iraisam-pirenena, ary mbola tsy nivoaka ny didy raikitra momba azy.
mercredi, 08 août 2018 17:12
DREN Vakinankaratra: Vita ihany ny famindram-pahefana
Vita ihany ny famidram-pahefana teo amin’ny mpitantana ny DREN Vakinankaratra rehefa niandrasana ora maromaro. Ny filan-kevitry ny Minisitra ny 1 aogositra 2018 lasa teo no nanafoanana ny fanendrena an’Atoa Rakotosalama Zefa Arisoa, nitantana ny DREN Vakinankaratra nandritra ny efa-taona, ary nanendrena an’Atoa Rakotoarimanana Heriniaina Nomenjanahary, mpitantana vaovao.
Nampanantena ny talem-paritra vaovao, izay mbola tanora dia tanora tokoa, fa hitady ny filaminana ny sehatry ny fanabeazana ny tenany ary tsy hanao tsinotsinona ny fitakian’ny mpampianatra, saingy tsy hanao tsinotsinona ny fanabeazana ny zana-bahoaka.
mercredi, 08 août 2018 17:00
Fanadinam-panjakana: Nanamafy ny tsy fihemorany ny mpitondra fanjakana
Nanamarika ny fitsidiham-paritra nataon'ny solontenan'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena teto Vakinankaratra, ny fanambarana sy fampahafantarana ny besinimaro fa tsy hihemotra ary tsy maintsy hisy ny fanadinam-panjakana.
Nanamafy izany Beatrefina Patrice raha nandalo teto Antsirabe renivohitr’i Vakinankaratra ny tenany nandritra ny fanokafana ny lalao an-tsekoly ny faran'ny herinandro teo.
mercredi, 08 août 2018 16:58
“Plaque rouge”: Natao ho an’ny fiaram-panjakana ihany sa ny moto ihany koa ?
Raha ny toromarika nomen’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta dia avadika “plaque rouge” ny laharan’ireo fiaram-panjakana rehetra, ary tamin’ny 28 jolay 2018 no fara-famadihana azy.
Mipetraka anefa eto ny fanontaniana mikasika an’ireo kodiaran-droa toy ny moto eny anivon’ny ministera sy rantsamangaikan’ny fanjakana, ary ny eny anivon’ny Faritra, toy ny Faritra Anôsy izay vao nividy moto miisa folo, satria tsy misy baiko na toromarika mazava mikasika azy ireny, ka ahiana ny fanararaotana ; ho avy rahateo ny fifidianana.
mercredi, 08 août 2018 15:53
Tolagnaro: Tsy azo tsenaina ilay minisitra fa adversera ?
Ho avy aty Tolagnaro, rahampitso 9 aogositra, ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny haivoary ary ny ala, izay lehiben’ny Faritra Anôsy teo aloha no zanaky ny faritra rahateo, Randriatefiarison Guillaume Venance. Misy baiko milatsaka sahady re, fa tsy azo tsenaina ity minisitra amperinasa ity, satria avy amin’ny mpanohitra ny fitondrana.
Misy hamorona “mission” mihitsy aza fa tsy hitsena, no tsy hanatrika ny zavatra hataon’io minisitra io eto Tolagnaro, izay atrikasa mahakasika ny tontolo iainana, miaraka amin’ny fampiratiana an-trano heva mifandraika amin’izany.
Avy amin’ny VPM-MMM, antoko tarihin’i Hajo Andrianainarivelo, izay manohana an’i Andry Rajoelina amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny minisitra Randriatefiarison Guillaume Venance.
mercredi, 08 août 2018 15:18
Sambava: Dahalo raindahiny navotsotra, naharomotra ny vahoaka
Nikasa hidina an-dalambe hilanja ny sorabaventy niazo ny tobin’ny Zandary Sambava ireo vahoaka avy ao amin’ny Fokontany Soavinandriana, tsy faly noho ny namotsorana dahalo raindahiny iray, izay nanafika sady nandroba lavanila 25kg sy volam-piangonana 2 tapitrisa Ariary.
Ny sabotsy 4 aogositra no natolotra ny mpitandro ny filaminana rehefa voasambotry ny Fokonolona nefa ny alahady ampitson’io dia navotsotra.
“Tsy maintsy voasazy izay Zandary namotsotra an'io dahalo io”, hoy ny Commandant de Compagnie Sambava Raharimandina Maguy izay niangavy ny olona ho tony sy hifampatoky ka hifanome tanana hatrany hamongorana ny olon-dratsy satria mbola miriaria miaraka amin’ny basy any ireo naman’ity dahalo ity.
mercredi, 08 août 2018 14:45
Antsirabe: Lanonana ara-pitsarana nanetriketrika
Lanonana ara-pitsarana nanetriketrika no nametrahana an-dRtoa Ramasitera Nihaingo Nasoloharivelo, ho filohan'ny Fitsarana ambaratonga voalohany eto Antsirabe, nandimby an'Atoa Rasoloharisoa, izay nitantana izany an-taonany maromaro.
Ny hametraka indray ny Fitsarana marina miseho amina endrika efatra dia ny fahaleovantenan'ny Fitsarana, tsy mitanila sy ny fanatonana ny vahoaka, ny fanarahana ny fampiharana ny didim-pitsarana, ho fampandrosoana an'Antsirabe.
Nambarany moa fa isan'ny ahatongavana amin'izany ny fahaleovantenan'ny Fitsarana saingy hisy ny hetsika hataon'izy ireo hanatratrarana izany aty Antsirabe.
mercredi, 08 août 2018 10:26
Feno harena Madagasikara: Sokafo ny maso dia mandraisa andraikitra
Io ny mampirangorango ny vahiny sy ny Malagasy mpivarotra Tanindrazana rehetra io.
Sokafo ny maso dia mandraisa andraikitra.
- Ny loko manga rehetra misy pétrole sy gaz;
- Ny loko mavo misy uranium, famokarana herinaratra, sy fanaovana baomba atomika sy ny maro hafa;
- Ny miloko mena volamena.
Dia jereo tsara fa ny faritra rehetra dia manana harena mitafotafo avokoa, fa mba aiza ny fandrosoantsika?